Horseball - Noti Caballos | Soavaly Noti
Ny soavaly soavaly, dia fanatanjahantena miatrika ekipa roa misy mpilalao efatra tsirairay avy miampy tahiry roa. Ny mpilalao dia tokony haka ny baolina avy amin'ny tany nefa tsy handrovitra ny biby, baolina mitam-piadiana enina izy io mba hahafahana mandalo sy miaro azy.
Tokony atao anaty sobika raikitra any amin'ny faran'ny tany. Fanatanjahan-tena haingam-pandeha izay mampifangaro ny ivelan'ny biby sy ny tanjaky ny mpilalao.
Ho hitanao amin'ity sehatra ity ny zava-drehetra mifandraika amin'ity fanatanjahantena ity. Torohevitra, fenitra, antsipiriany, fitaovana, tantaram-panatanjahantena ary na dia ny fifaninanana sasany atao amin'ny firenena sy iraisam-pirenena. Ny soavaly soavaly Fanatanjahan-tena somary vaovao ity fa iray izay mahazo mpankafy maro hatrany.
Ny soavaly dia ampiasaina amin'ny ankabeazany ho an'ny fanatanjahantena, ary koa ho an'ny ...